Nhau - RFID ruzivo rwekutanga
1. Chii chinonzi RFID?
RFID ndiyo chidimbu cheRadio Frequency Identification, kureva, redhiyo frequency identification. Inowanzonzi inductive electronic chip kana proximity card, proximity card, non-contact card, electronic label, electronic barcode, etc.
Iyo yakazara RFID sisitimu ine zvikamu zviviri: Reader uye Transponder. Nheyo yekushanda ndeyekuti Muverengi anotumira imwe frequency yeasingaperi radio wave simba kuTransponder kutyaira Transponder wedunhu kutumira iyo yemukati ID Code. Panguva ino, Muverengi anogamuchira ID. Code. Transponder yakakosha mukuti haishandise mabhatiri, kudhumhana, uye swipe makadhi saka haitye tsvina, uye chip password ndiyo yega munyika isingakwanise kukopwa, ine kuchengetedzwa kwepamusoro uye hupenyu hurefu.
RFID ine huwandu hwakawanda hwekushandisa. Zvishandiso zvakajairika parizvino zvinosanganisira machipisi emhuka, mota chip anti-kuba zvishandiso, yekuwana control, yekupaka nzvimbo yekudzora, kugadzira mutsara wekugadzira, uye kutonga kwezvinhu. Kune marudzi maviri ematagi eRFID: ma tag anoshanda uye passive tag.
Ichi chinotevera chimiro chemukati chemagetsi tag: dhiyabhorosi dhiyagiramu yekuumbwa kwechip + antenna uye iyo RFID system.
2. Chii chinonzi electronic label
Mategi emagetsi anodaidzwa kuti radio frequency tags uye radio frequency identification muRFID. Iyo isiri-inobata otomatiki yekuzivikanwa tekinoroji inoshandisa mawiiresi eredhiyo kuona zvinhu zvinonangwa uye kuwana data rakabatana. Basa rekuzivikanwa haridi kupindira kwevanhu. Senge isina waya vhezheni yemabhakodhi, RFID tekinoroji ine isingapinde mvura, antimagnetic, tembiricha yakakwira, uye Hupenyu hwesevhisi yakareba, kureba kuverenga, data pane iyo label inogona kuvharirwa, data rekuchengetedza rakakura, ruzivo rwekuchengetedza runogona kuchinjwa zvakasununguka uye zvimwe zvakanaka. .
3. Chii chinonzi RFID tekinoroji?
RFID redhiyo frequency identification ndeye isingabatane otomatiki yekuzivisa tekinoroji, iyo inoziva yega chinhu chainonangwa uye inowana ine hukama data kuburikidza neredhiyo frequency masaini. Basa rekuzivikanwa haridi kupindira kwemaoko uye rinogona kushanda munzvimbo dzakasiyana dzakaoma. RFID tekinoroji inogona kuona yakakwira-kumhanya zvinhu uye inogona kuona akawanda ma tag panguva imwe chete, uye mashandiro acho anokurumidza uye ari nyore.
Zvigadzirwa zveredhiyo kuredhi kure kure hazvityi nharaunda dzakaomarara senge mafuta emafuta uye kusvibiswa kweguruva. Vanogona kutsiva mabarcode munzvimbo dzakadai, semuenzaniso, kuronda zvinhu pamutsetse wekusangana wefekitori. Zvigadzirwa zveredhiyo kureba-refu zvinonyanya kushandiswa mutraffic, uye chinhambwe chekuzivikanwa chinogona kusvika makumi emamita, senge otomatiki kuunganidza kana kuzivikanwa kwemotokari.
4. Ndezvipi zvakakosha zvikamu zveRFID system?
Iyo inonyanya kukosha RFID system ine zvikamu zvitatu:
Tag: Inoumbwa nekubatanidza zvinhu uye machipisi. Tegi yega yega ine yakasarudzika kodhi yemagetsi uye inonamirwa kune icho chinhu kuti chitarise icho chinonangwa. Muverengi: Chishandiso chinoverenga (uye dzimwe nguva chinonyora) tag ruzivo. Yakagadzirirwa kubatwa nemaoko kana kugadziriswa;
Antenna: Tumira redhiyo frequency masiginecha pakati peteki nemuverengi.